स्थानिय सरकारका योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न के गर्ने ? (अडियोसहित) – Jagaran
स्थानिय सरकारका योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न के गर्ने ? (अडियोसहित)
सुर्खेत, १२ असार (जागरण) । संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरुप नेपालका तीनवटै तह संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आफ्नो आफ्नो आवश्यकताको आधारमा भन्दै विकासका लागि विभिन्न मितिमा वजेट विनयोजन गरेका छन् । यसैगरी विगतका वर्षहरुमा पनि वजेट विनियोजन गरी विकास निर्माणका कार्यहरु अघि बढाइन्थे नै । तर सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । योजना निर्माण हुन्छन्, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर र गुणस्तरलाई प्रायः ख्याल नगर्ने गरेको पाइन्छ ।
यही सन्दर्भमा प्रशिक्षार्थी रेडियोकर्मी चन्द्रा बुढा र लुना बुढापृर्थीले तीनवटै तहका सरकारले वजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अब यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि कसले के गर्नुपर्ला ? भनेर जनतालाई सोध्नुभएको छ ।
सुनौँ जनताको आवाज जस्ताको त्यस्तैः
जगदुल्लाह १ का अध्यक्षसँग कुराकानी (अडियो सहित)